I am sharingaBurmese song for Mother's day. It was written by Saw Bwe Moo. I want to share two versions, which I found on SoundCloud: the first by Myo Nyunt (မျိုးညွန့်) and the second by Mee Mee Khel (မီးမီးခဲ).
တောင်တန်း​က​လာ ​ကျော​င်း​နေ​သော မိန်း​ကလေး​ရာ
ချို​မြိန် ပူနွေး အိပ်မက်​လေး​တွေ​ထဲ
မြို့​ကျောင်း​ကြီး​မှာ ကျောင်း​နေ​သော မိန်း​ကလေး​ရာ
လက်ဖက်​ခူး​တဲ့​အမေ လက်ဖက်​ရွက်​ကလေး သိန်း​သန်း​ကုဋေ
အမေ့​ကျော ပူ​စေ​တဲ့ နေ​လောင်​ခြင်း ဒဏ်​ဟာ
အရိပ်​လေး​ထဲ​မှာ ကျောင်း​တက်​သော သမီး​အတွက်​ပါ
ဒီ​မြေ ဒီ​တောင်တန်း​တွေ​က လွမ်း​ပြီ​ဆို​တာ
အမေ​အို မျှော်​နေ​ရင်း ပင်ပန်း​လှ​ပြီ​ဆို​တာ
မြို့​ကျောင်း​ကြီး​မှ အ​ရောက်​ပြန်​ခဲ့ မိန်း​ကလေး​ရာ
မျိုးညွန့် (Myo Nyunt)
မီးမီးခဲ (Mee Mee Khel)